လေထုတွန်းဘို့သံလိုက်ဖိအားကိုထိန်းချုပ်အဆို့ရှင် China Manufacturer
စက်ဓာတ်ငွေ့ Solenoid Valve welding,အသေးစားအနိမျ့ဖိအား Solenoid Valve,ဓါတ်ငွေ့ရောနေသောပြောင်းလဲမှုသံမဏိ Pulse Valve
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: စက်ဓာတ်ငွေ့ Solenoid Valve welding,အသေးစားအနိမျ့ဖိအား Solenoid Valve,ဓါတ်ငွေ့ရောနေသောပြောင်းလဲမှုသံမဏိ Pulse Valve
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > electromagnetic Pulse Valve > လေထုတွန်းဘို့သံလိုက်ဖိအားကိုထိန်းချုပ်အဆို့ရှင်
ပထမဦးစွာ ZGM ညာဘက်ထောင့်သွေးခုန်နှုန်း solenoid valve ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်:
ZGM ညာဘက်ထောင့်သွေးခုန်နှုန်း solenoid valve ဟာညာဘက်ထောင့်လေယာဉ်မှူးမြှေးယင်းမတိုင်မီကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, မြင့်သောဆေးထိုးအသံအတိုးအကျယ်, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဒီဇိုင်း, လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုမြင့်မားအကြိမ်ရေဂျာမန်ဖြစ်စဉ်ကိုပို့ကုန်စီးရီး, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေး, ညစ်ညူးခြင်းနှင့် filter ကိုအကောင်း (filter ကိုအသားတင်ကျော်ကို 80 ကွက် / cm2) ရှိပါတယ် အဆို့ရှင်; နှင့် solidification သို့မဟုတ်ကြည်လင်ဖြစ်ရပ်ဆန်းမျှ။
မော်ဒယ်: BZCJ, B,: ပေါက်ကွဲမှု-သက်သေ။
နှစ်ယောက် ZGM ညာဘက်ထောင့်သွေးခုန်နှုန်း solenoid valve ဟာထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှု:
ZGM ညာဘက်ထောင့်သွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင်ကျယ်ပြန့်ဆေးဝါးစက်ရုံ, စက္ကူစက်, လက်သမားစက်ရုံ, အစာကျွေးခြင်းစက်ရုံ, ဆိုးဆေးစက်ရုံ, မြေမှုန့်စုဆောင်းနှင့်ရေနံဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအိတ်ဖုန်မှုန့်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ကျပ်ခိုးမှုတ် system အတွက်ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင် II ကို pulsed ZGM ညာဘက်ထောင့်များ၏ 1. 1. ကုန်ပစ္စည်းအမည်နှင့်အမျိုးအစား။ ZGM caliper သွေးခုန်နှုန်းလျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင် caliber 3. သင်တို့သည်ငါတို့၏မှန်ကန်သောရွေးချယ်ရေးတို့အတွက် attachment များကိုရှိပါသလား?
နှစ်ယောက်တည်း။ အဆိုပါ ZGM ညာဘက်ထောင့်သွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင်ဒီဇိုင်းယူနစ်ကရွေးချယ်ထားပြီးလျှင်, ZGM ညာဘက်ထောင့်သွေးခုန်နှုန်းလျှပ်စစ်သံလိုက်အဆို့ရှင်အတိုင်းငါတို့အရောင်းဌာနကိုတိုက်ရိုက်အမိန့်ပေးပါ။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: စက်ဓာတ်ငွေ့ Solenoid Valve welding , အသေးစားအနိမျ့ဖိအား Solenoid Valve , ဓါတ်ငွေ့ရောနေသောပြောင်းလဲမှုသံမဏိ Pulse Valve , High Quality ဓါတ်ငွေ့ Solenoid Valve , ညာဘက်ထောင့်လေတပ် Solenoid Valve , စက်မှု DMF T က Solenoid Valve , အမျိုးအစားဓါတ်ငွေ့ Solenoid Valve မြှေး ,2လက်မအိတ်အမျိုးအစား Solenoid Valve